N'ime ogo nke coronavirus, IMM gosipụtara nhazi nke ọrụ obodo dị n'ihu kọmịk ama ma kọwaara Kọmitii Hygiene dị ọcha. N’ịkwuputa mkpebi ndị a mere, Onye isi ala Ekrem İmamoğlu kwuru na ọrụ ndị metro ga-akwụsị n’elekere 21.00:XNUMX nke Mọnde, [More ...]
Coronavirus Mmetụta nke Number nke njem na Public Transportation na Turkey
N'ihi COVID-19, ọnụ ọgụgụ ndị njem n'ụgbọ njem ọha belatara nke ukwuu na isi obodo gburugburu ụwa. Ndị bi n'ọtụtụ mba na-ezere ụgbọ njem ọha iji belata ọrịa ha, ebe ha na-arụ ọrụ site n'ụlọ na [More ...]
Ojiji Ibufe Ọha na Istanbul na-ebelata Kwa Daybọchị
Statlọ Ọrụ Statistics nke Istanbul, nke guzobere n'okpuru njikọta nke BİMTA a, onye enyemaka nke Metrolọ Ọrụ Mgbasa Obodo nke Istanbul, na-ekerịta data banyere etu ọrịa ahụ si emetụta ọpụpụ njem na Istanbul na akaụntụ Twitter ya. Na mgbakwunye, İBB Onye isi ala Ekrem İmamoğlu na [More ...]
Ndị bi na Istanbul ga-enwe ike iji ekwentị ha dị ka kaadị Istanbul
Site na ngwa ọhụrụ ahụ nke ụlọ ọrụ mmekọ obodo nke Istanbul Metropolitan Municipal (İBB) mepụtara BELBİM A.Ş, ndị bi na Istanbul ga-enwe ike ịbanye n'ụgbọ njem ọha na eze site na sistemụ matriks data na smartphones ha. TUYAP bu nke ndi njem nlegharị anya nke njem Oke Osimiri nke Oke Ọwụwa Anyanwụ andwa na Ihe ngosi njem (EMITT) haziri. [More ...]
Iji belata njupụta nke na-eme ka kwụ n'ahịrị site n'oge ruo n'oge na ụlọ ọrụ Istanbulbulkart, IMM na-etinye İşlem Mobile Trading Point araç ọrụ. Ogwe ntinye aka na ntanetị, nke etinyere na mbụ na Üsküdar, na-ejere nkezi mmadụ 120 kwa ụbọchị. [More ...]
Daybọchị mbụ nke afọ ọhụrụ na Transportgbọ njem Istanbul n'efu
Ugbo ala nke ndi isi obodo nke obodo anakpo Istanbul ga enyere ndi aka n’ulo n’iile n’ulo ubochi nke ahochuru n’aho 2020, ubochi ule na mmeghe ulo akwukwo. Transportgbọ njem na Istanbul n’ụbọchị mbụ nke Afọ Ọhụrụ [More ...]
Ozi Ọma diri ndi Istanbulites n’ime Afọ Ọhụrụ!
Ozi Ọma diri ndi Istanbulites n’ime Afọ Ọhụrụ! ; Ugbo ala nke ndi IMM ga enye ndi oru ugbo ala n’afo 2020, ubochi ule na mmeghe ulo ha n’efu. Afọ Ọhụrụ [More ...]
Istanbul na-ekwu okwu banyere Congressgbọ njem Congress Congress na-amalite echi
Obodo Obodo Istanbul, otu n'ime nsogbu kachasị mkpa nke obodo ahụ, okwu banyere ụgbọ njem dị na tebụl. Nzukọ a nke bystanbul na-ekwu maka Transportgbọ njem Istanbul ağı ga-eme Onye isi ala obodo isi obodo Ekrem İmamoğlu na 17-18 Disemba. [More ...]
A ga-eme Transportgbọ njem Istanbul 17-18 na December
Ekrem İmamoğlu, onye isi obodo isi obodo Metropolitan nke Istanbul, kwuru okwu mmechi nke "Wheeled Ọdụ Publicgbọ njem Ọha na Ọha" ebe a tụlere ọnọdụ dị ugbu a, ndozi na ntụnye usoro usoro njem ọhaneze. İmamoğlu kwuru, adan na-echefughi na onye ahịa ya bụ onye echere ya, [More ...]
Transportationgbọ njem ọha na Istanbul na Day Day. 29 October Republic Day's 96. IMM kwadebere iji mee mmemme afọ ahụ dị ebube, ndị njem na njem ọha a na ezumike mba a kpebiri inye ndị mmadụ n'efu. Obodo Obodo Istanbul (IMM) [More ...]
Obodo Obodo ukwu nke anakpo Istanbul mere nzukọ omumu ihe eji abanye ya nke sitere na ndi akwukwo ghari rue ndi nnochite anya mpaghara. Ihe omumu ihe omumu a lebara anya oru aka emere rue ta na usoro uzo ugbo ala na Istanbul na uzo ekwesiri iburu ya. [More ...]
Na Istanbul, ihe ruru ụmụ akwụkwọ nde 3 ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu puku ndị nkuzi 200 mere mmalite nke klaasị taa. N’obodo ebe ndị ọhaneze na-ebugharị ụgbọ njem anaghị akwụ ụgwọ, a na-ebugharị ụgbọala ndị ọrụ iji buru ndị nne na nna. Citizensmụ amaala, İBB Onye isi Ekrem İmamoğlu'nun [More ...]
9, nke na-emepe ụlọ akwụkwọ, ga-enye ndị njem njem ọha na n'efu na Istanbul na Septemba Mọnde n'etiti oge 06: 00 - 14: 00 awa. 2019-2020 n’afọ akwụkwọ 9 Septemba 2019 bidoro na Mọnde. Nde mmadu 16 [More ...]
Onye isi obodo ukwu nke obodo Istanbul (IMM) 2019-2020 Onye isi Ekrem İmamoğlu na-akọwa usoro ndị e mere maka afọ agụmakwụkwọ, ụgbọ njem ọha ga-enye ọrụ n'efu na ụgbọ ala ndị ọrụ ga-eburu ndị nne na nna chọrọ ụbọchị mbụ, ka o kwuru. ka ụmụ amaala [More ...]
9, ebe afọ agụmakwụkwọ ọhụrụ ga-amalite na Istanbul, ka ewerere iji gbochie nsogbu okporo ụzọ na Mọnde. IMM, Nchebe na Gendarmerie ga-arụ ọrụ ọnụ iji hụ na ọpụpụ okporo ụzọ. 06: 00-14: Nnukwu n'etiti awa 00 [More ...]
Ememe emume mmeri nke 30 nke August, ụgbọ njem ọha na Istanbul ga-ebu ndị njem n'efu. Dabere na Obodo Obodo Istanbul (IMM), mmeri dị ukwuu nke 97. n'ọtụtụ akụkụ nke obodo ime ememme [More ...]
Ezughi oke nke uzo ugbo ala nke IETT kesara na-ekwu na 24 ga-aru oru otutu oge yana eziokwu na otutu n'ime ha bu ahịrị ọdụ ụgbọ elu gbakọrọ. Ọ bụ ezie na Megakent Istanbul bụ obodo dị ndụ n'abalị, ụgbọ njem ọha na-adị n'abalị. [More ...]
Mkpebi nke Metrolọ Ọrụ Nkwuputa Obodo Obodo nke Istanbul mere mkpebi nke Onye Isi oche Ekrem İmamoğlu ga-enye ndị njem njem ọhaneze na Istanbul na Victbọchị Mmeri na thebọchị Mmeri na August 30. IETT, ụmụ amaala nwere ike ịnweta ebe a na-egbu ndị mmadụ nke IMM [More ...]
Obodo Obodo Obodo Istanbul, Eid al-Adha, 30 Day Victory Day na ụlọ akwụkwọ ga-emeghe na Mọnde na Septemba 9 ụgbọ njem ọha na Istanbul kpebiri na ha ga-enye ọrụ n'efu. Metrolọ Nkwuu Obodo Obodo Istanbul, IMM [More ...]
Mgbe a na-arụ ọrụ ụgbọ okporo ígwè 221,7 kilomita na Istanbul, ogologo nke sistemụ ụgbọ okporo ígwè n'obodo ahụ ga-eru kilogram 233,05 site na akụkụ kilogram 454,75 dị ugbu a. Mkpa usoro ụgbọ okporo ígwè iji belata njupụta nke Istanbul [More ...]
Ọ bụ ezie na mkparịta ụka maka ọnwụ AKP nke ọtụtụ ndị mepere emepe ka na-aga n'ihu, gọọmentị na-achị achị emeela atụmatụ dị iche iche banyere obodo. N'ime iwu ọhụrụ ahụ, ọkachasị n'obodo ndị mepere emepe enweghị ike ịme azụmahịa azụmaahịa [More ...]